တရုတ် ဟူနန်ပြည်နယ် အစိုးရဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ လုပ်ကိုင? - Yangon Media Group
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန် တရုတ်ဟူနန် ပြည်နယ်အစိုးရဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်လေ့လာလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဟူနန်ပြည်နယ်မှ ဒုတိယမြို့တော်ဝန် Mr.HeBaoxing ဦးဆောင် သော အဖွဲ့ဝင် ၂၇ ဦးပါဝင်သည့် အဖွဲ့သည် နှစ်နိုင်ငံလုပ်ငန်းရှင်များအကြား စီးပွားရေးအဆက်အသွယ်များရရှိရန်နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေး၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်း တို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ China (Hunan) – Myanmar Economic & Trade Cooperation Conference ကို စက်တင်ဘာ ၂၄ ရက်တွင် ရန်ကုန်မြို့ Sule Shangri La Hotel ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဟူနန်ပြည်နယ် ဒုတိယမြို့တော်ဝန် Mr.He Baoxing က ”မြန်မာပြည်ကို ဟူနန်ပြည်နယ်က လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာ ကုမ္ပဏီကြီး ၃ဝ ရှိပါပြီ။ လယ်ယာထွက် ကုန်ပစ္စည်း၊ သတ­္တုတွင်းထွက်အစ ရှိတဲ့လုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်နေ ပြီး ဆက်လက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ ဆောင်ရွက်ဖို့ညှိနှိုင်းမှုတွေလည်းရှိပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ဟူနန်ပြည်နယ်ရဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဟာ ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်မှာ ၅၂ ရာခိုင်နှုန်းအထိ တိုးမြင့်လာခဲ့ပါတယ်။အခုအခါ ဟူနန်ပြည်နယ်က အဖွဲ့တွေနဲ့ စုစည်းပြီးတော့ ဒီမြန်မာနိုင်ငံကို လာရောက်ပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုတဲ့အနေအထားတွေကို ကြည့်ရှုတာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆက်လက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ နောက်ထပ်ခြေတစ်လှမ်းအနေနဲ့ သေသေချာချာလေ့လာဖို့ ဒီကိုရောက်လာ ခြင်းဖြစ်ပါတယ်”ဟု စက်တင်ဘာ ၂၄ ရက်က ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ယင်းအခမ်းအနားတွင် ပြောသည်။
တရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် လာရောက်ပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ရန် အကောင်းဆုံးအချိန်အခါဖြစ်ခြင်းကြောင့် လာရောက်လုပ်ကိုင်ရန် တရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များကို ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ်မှ ယင်းအခမ်းအနားတွင် ဖိတ်ခေါ်မှုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ်၏ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာမောင်မောင်လေးက ”မြန်မာနိုင်ငံမှာ အရင်က ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ နှစ်မျိုးရှိခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်လည်း ယခုအခါမှာတော့ အဲဒီနှစ်ခုပေါင်းပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေတစ်ခုတည်း သာ ရှိပါတော့တယ်။ အဲဒီဥပဒေထဲမှာ နိုင်ငံသားများရရှိတဲ့အခွင့် အရေးတွေ အတိုင်းအနည်းငယ်သော ကန့်သတ်ချက်မှအပ အားလုံးပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေကိုလည်း ပြင်ဆင်ရေးထိုးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီဥပဒေအရ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်လည်း ၃၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ရှယ်ယာထည့် ဝင်လို့ရပါတယ်။ ဒါ ကြောင့် ယခုအခါမှာ တရုတ်စီးပွား ရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လာရောက်ပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်ဖို့ အကောင်းဆုံးအချိန်အခါဖြစ်တဲ့အတွက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကို လာရောက်လုပ်ကိုင်ဖို့ ဖိတ်ကြားပါတယ်။ လာရောက်လုပ်ကိုင်မယ်ဆိုပါက လိုအပ်တာတွေကိုလည်း ကျွန်တော်တို့အသင်းချုပ်က အစွမ်းကုန် ကူညီ ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်”ဟုပြောသည်။
ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ်အနေဖြင့် တရုတ်စီးပွားပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံမှ စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ CCPIT? Yunna၊ Guangxi ပြည်နယ်များအပါအဝင် အခြား ပြည်နယ်များမှ စီးပွားရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အပြန်အလှန်ကူညီပံ့ပိုးပေးရန် နားလည်မှုစာချွန် လွှာ (MoU) ၂၁ စောင်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။